प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - ताईजो हेया प्लास्टिक मोल्ड कं, लि
A: Heya मोल्ड एक प्लास्टिक मोल्ड कारखाना हो।
Q: तपाइँको कम्पनी कहाँ छ?
A: हेया मोल्ड नं। In मा अवस्थित छ, हौशी रोड, Huangyan जिल्ला, Taizhou शहर, Zhejiang, चीन मुख्य भूमि। थर्स लुकियाओ एयरपोर्टबाट करीव ;० मिनेट जति छ; ताईझो रेलवे स्टेशन बाट २० मिनेट। हामी हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कम्पनीमा भ्रमण गर्नका लागि
Q: कसरी तपाइँको कारखाना जान?
A: तपाईं उडान, ट्रेन र बस द्वारा हेया मोल्ड कारखानामा आउन सक्नुहुनेछ।
गुआzhou्झाउबाट ताईझो शहरको उडानमा करिब २ घण्टा छ; Shanghai घण्टा हाइट स्पीड रेल बाट शंघाईदेखि ताईझो स्टेशन; १ घण्टा रेल बाट निing्गो वा वेन्जुउबाट ताईझो स्टेशन। Yiwu बाट Taizhou स्टेशन को लागी बस वा ट्रेन बाट hour घण्टा।
Q mold कस्तो प्रकारको जानकारीलाई मोल्ड उद्धरणको लागि आवाश्यक हुन्छ?
एक: यो तपाइँको उत्पादन मा निर्भर गर्दछ, त्यसैले Heya मोल्ड संग सम्पर्क गर्न यसलाई यकिन गर्न स्वागत छ। कारणको रूपमा, यो उत्तम छ यदि तपाईंसँग यी जानकारीहरू तल छन् भने: १, आकार वा २D / 3D डिजाइनको साथ नमूना फोटो
२, गुहा मात्रा
,, धावक प्रकार, चिसो वा तातो
,, मोल्ड स्टिल प्रकार, P20, 18१,, २383838, H13, S136,2316, यस्तै।
,, इंजेक्शन प्यारामिटर वा प्लेट आकार (टाई रॉड दूरी)
प्रश्न: तपाइँको मोल्ड डिलिभरी समय कति हो?
A: यो मोल्ड संरचना र आकारमा निर्भर गर्दछ।
सामान्यतया यो मोल्ड डिजाइनको लागि ~ ~ १ days दिनहरू हुन्छ, र मोल्ड उत्पादनको लागि १~ ~ day० दिनहरू जब हेया मोल्डले तपाईंको निक्षेप भुक्तानी र मोल्ड डिजाइन पुष्टिकरण प्राप्त गरे।
प्रश्न: कसरी टेस्ट नमूना पठाउन? यो सित्तैमा वा थप हो?
उत्तरः हेया मोल्डले DHL, UPS, EMS, FEDEX वा TNT द्वारा परीक्षण नमूना पठाउँनेछ। र उद्धरण हामी तपाईंलाई नमूना डेलिभरीको लागत सहित 1-2 पटक प्रस्ताव गर्दछौं।
Q: तपाइँको गुणवत्ता नियन्त्रण को बारे मा?
A: हेया मोल्डसँग मोल्ड क्वालिटी नियन्त्रण गर्न पेशेवर टीमहरू छन्, र हामी विश्वास गर्दछौं कि क्वालिटी नियन्त्रण व्यवसाय चलाउन पहिलो प्राथमिकता हो।
प्रश्न: तपाइँ कस्तो प्रकारको मोल्ड सतह प्रक्रिया प्रयोग गर्नुहुन्छ?
A: हेया मोल्डले तपाइँको माग र मोल्ड विशिष्ट द्वारा यसलाई अनुकूलित गर्दछ, मोल्ड सतहलाई प्रशोधन गर्दै: मिरर पोलिश; बनावट; कोर र गुहामा क्रोम प्लेटि treatment उपचार; नाइट्राइड र भ्याकुम गर्मी उपचार
प्रश्न: नमूनाहरू कसरी अनुमोदन गर्ने?
A: तपाईं हाम्रो कारखानामा सीधा मोल्ड टेस्ट लिन आउन सक्नुहुनेछ, हेया मोल्डले तपाईंलाई नमूनाहरू र मोल्ड चलिरहेको भिडियो पठाउँनेछ।
Q ： भुक्तानी सर्तहरू
A: %०% T / T अग्रिम, र शिपमेन्ट भन्दा पहिले सन्तुलन।